Imibuzo evame ukubuzwa - iLinyi Juda Science and Technology Environmental Protection Engineering Co., Ltd.
Kuthiwani ngencazelo yomkhiqizo?
Kuthiwani ngenqubo yokukhiqiza?
I-limestone namalahle kufakwa ngokulandelana emigqonyeni yokugcina ngeforklift. Izingxenye ezingezansi zemigqomo zinama-hopper anesisindo esizenzakalelayo. Ngemuva kokukala ngokwenani elibekwe yikhompyutha, i-limestone namalahle kuyahlanganiswa. Izinto ezixubekile ziphakanyiswa yimoto eyeqayo ngebhuloho elithambekele phezulu phezulu komlilo we-lime, bese ifafazwa ngokulinganayo eziko ngomshini wokulayisha kanye nemishini yokuphakela.
Impahla eluhlaza yehlela ngaphansi kwesenzo samandla ayo adonsela phansi. Ngaphansi kwesithando somlilo, umshini wokushisa izimpande upholisa umcako phansi eziko. Umoya ovela ezansi ushintshanisa ukushisa nomcako bese ungena endaweni yokubala njengophethiloli ngemuva kokushisa kwawo kufinyelela kuma-degree angama-600.
ILimestone kusuka phezulu komlilo idlula indawo yokufudumeza, indawo yokubala, nendawo yokupholisa, nokuphendula okuphelele kwamakhemikhali ngaphansi kwesenzo sokushisa okuphezulu ukubola kube yi-calcium oxide (lime). Emva kwalokho, ikhishwa phansi eziko ngomshini wediski lomlotha kanye nedivayisi ekhipha umlotha ngomsebenzi wokukhishwa okuvalwe ngophawu, ukubona ukungathululwa komoya.
Kuthiwani ngezici zomkhiqizo?
Ikakhulu qedela isinxephezelo esinesisindo esizenzakalelayo nokulawula izinqubo zokuxuba, ukukhipha i-fire kanye nokukhishwa kukalika.
(1) Uhlelo oluzenzakalelayo nolwezandla zombili zihlonyisiwe. Ngaphandle kokusebenza okwenziwa ngesandla kwebhokisi lokusebenza lesayithi, zonke zingalawulwa ngokusebenza kwekhompyutha egumbini lokulawula eliphakathi.
(2) Idatha yazo zonke izinsimbi (njengegeji yengcindezi, imitha yokugeleza, ithuluzi lokushisa) iboniswa kukhompyutha futhi ingaphrintwa yiphrinta.
(3) Uhlelo oluphelele lwe-WINCC womuntu osebenza ngomshini.
(4) Qedela i-Siemens ehlakaniphile yokulinganisa imodyuli yokulinganisa, uhlelo lokulinganisa nesinxephezelo.
(5) Izinga lezinga lezinto eziphathekayo ezithembekile zelime, amakhosi ahlakaniphile neminye imishini yokuphathelene.
(6) Isistimu yokuqapha ikhamera ephelele esizeni. Izithombe ezibukhoma zesikhathi sangempela nedatha yekhompyutha yokulawula okuphakathi, ukuqonda ngokunembile konke ukuxhumana komugqa wokukhiqiza.
(7) Uhlelo olunokwethenjelwa lwe-Siemens PLC, inverter kanye nekhompyutha yezimboni isistimu ehlakaniphile ye-microcomputer enezinga ezimbili.
(8) Ukulungele imvelo. Ngokuya ngezinqubomgomo zokuvikelwa kwemvelo nezidingo zokukhiqiza, ingahlonywa ngohlelo lokwelashwa komsizi kanye nohlelo lokwesula ukufezekisa ukungcola okusemthethweni.
Kuthiwani ngezinsizakalo zakho?
Izinsizakalo zangaphambi kokudayiswa: Sikunikeza uhlelo lweprophase, inqubo yokugeleza kokuklanywa nemishini yokukhiqiza ngokuya ngesidingo sakho esikhethekile.
Izinsizakalo Zokuthengisa: inceku Thumela ochwepheshe ezindaweni zokusebenza ukuze baqondise ukufakwa nokulungiswa, ukuqeqesha ama-opharetha nokuqedela isheke futhi wamukele ndawonye nawe.
Izinsizakalo Zangemva Kokuthengisa: ukwethembeka Ukusungula ubungani besikhathi eside, sizovame ukuhambela amakhasimende.
Ngingavakashela imboni yakho?
Yebo. Amakhasimende amaningi asekhaya nakwamanye amazwe avakashela ifektri yethu minyaka yonke.
Kuze kube nini iwaranti yemishini yakho? Ingabe unikeze izingxenye ezisele?
Isikhathi sethu sewaranti unyaka owodwa ngokujwayelekile. Asikwazi ukunikela izingxenye ezisele.
Ingabe uyanikeza ukuqeqeshwa kokusebenza kwemishini?
Yebo. Singathumela onjiniyela abangochwepheshe kusayithi yokusebenza ukufakwa kwemishini, ukulungiswa, nokuqeqeshwa kokusebenza. Bonke onjiniyela bethu banamapasipoti.
Idiphozithi engu-30% ye-TT, inkokhelo engu-70% ekhokhwa ngokulingana nekhophi yemibhalo yoqobo yokuhambisa.
Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide Production Line, Ukwenza i-Calcium Hydroxide, Igama Lwebhizinisi LeCalcium oxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide, Calcium oxide Futhi Calcium Hydroxide, Ukwenza I-calcium Hydroxide,